HVM Taolagnaro : Chabani Nourdine « coach » Faritra Anosy -
AccueilRaharaham-pirenenaHVM Taolagnaro : Chabani Nourdine « coach » Faritra Anosy
Notendren’ny antoko HVM ho « coach »-n’ny Faritra Anosy ny minisitry ny Varotra Chabani Nourdine. Natolotry ny filohan’ny antoko HVM, Rivo Rakotovao, tamin’ny vahoakan’i Taolagnaro tamin’ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo ny tenany sy ny mpandrindra ny Faritra Anosy, Rtoa Annick. Vahoaka manodidina ny 30 000 no tonga namaly ny antso tamin’izany, ary nahitana olom-boafidy, loholona HVM sy solombavambahoaka toa ny depiote Nicolas Randrianasolo, ireo mpanao politika mpomba ny fitondrana toa an-dry Yves Aimé, sns.
Nisongadina nandritra ireo fandraisam-pitenenana àry fa mihaino sy mahafantatra ny hetahetan’ny vahoaka manerana ny Nosy ny HVM ary ho an’ny Faritra Anosy sy Taolagnaro manokana dia hanomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny lalana araka ny baikon’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina. Nasian’ny filohan’ny antoko Rivo Rakotovao tsindrim-peo ny filazana fa mahenika an’i Madagasikara ny antoko HVM, ary vonona hanome tanana ny vahoaka malagasy miaraka amin’ny filoham-pirenena. Nomarihin’ny minisitra Chabani Nourdine tamin’ny lahateniny, ho fanomezan-toky ireto vahoaka manodidina ny 30 000 ireto ny hoe « efa vita sonia ny vola hanamboarana ny lalana ».
Manaporofo indray izao fa tsy mikely aina amin’ny fampandrosoana ny Faritra manerana an’i Madagasikara ity fitondram-panjakana ity, ary tena maro tokoa ireo asa efa vita araka ny vina napetraky ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fanarenana ny firenena taorian’ireny krizy lalina vokatry ny fanonganam-panjakana nisy teto ny taona 2009 ireny. Nasehon’ny vahoakan’i Taolaganaro tamin’ity fotoan-dehibe ity fa vahoaka milamina ary liam-pandrosoana tokoa izy ireo.